Posted by: chhepyastra weekly | सेप्टेम्बर 24, 2011
आˆनै पार्टीको विश्वास जित्न नसक्ने सरकारको कुनै औचित्य छैन
नेत्रविक्रम चन्द्र ,विप्लव’ स्थायी समिति सदस्य, एनेकपा माओवादी
० ए. माओवादी पार्टी भित्रको विवाद चरमउत्कर्षमा पुग्यो, अब पार्टी फुट्छ भन्ने चर्चा छ नि, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
पार्टी फुट्छ भन्ने होहल्ला गरेर विषयवस्तुलाई विषायन्तर गर्न खोजिएको छ । मुख्य विषय नेपाली राजनीतिमा जनताको स्थान र नेपाली राजनीतिलाई कुन दिशा दिने भन्नेसाग सम्बन्धित छ । जनताको क्याम्पबाट पछि हटेको प्रवृत्तिले भ्रम छरेर जनताको अधिकारको बहसलाई एउटा प्रातिधिक बहस पार्टी टुटफुट लेनदेनको बहसमा बद्लिदिन्छ, हामी यसखाले प्रवृत्तिहरुबाट सजग हुनुपर्छ । हाम्रो पार्टीभित्रको बहस फुट्ने कि नफुट्ने भन्ने होइन । नेपाली जनताका अधिकारलाई नयाा संविधानलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने नेपालको पुरानो राज्यसत्तालाई बदल्न सकिन्छ कि सकिादैन भन्ने नै अहिलेको मुख्य मुद्दा हो ।
० पार्टीका वरिष्ठ नेता एवम सरकारका मन्त्रीहरु नै पार्टी नीति विपरित गएको भन्दै तपाईं लगायतका नेताहरु माथि कारवाही गर्नुपर्ने, र पार्टी छोडेर जान समेत सार्वजनिक चुनौति दिादै हिाडेका छन् नि ?
आन्दोलनले नेता जन्माउाछ तर नेता आपै हो कि होइन भनेर प्रमाणित गर्ने कुरा धेरै गाह्रो हुन्छ । जो नेताहरु अहिले उट्पयाङ्ग कुरा गर्दै उत्ताउलो कुरा गर्दै हिाडेका छन् । पार्टीभित्रको सत्ताको दुरुपयोग गरेर सत्य तथ्यलाई भाचभुाझ पार्ने जो भ्रामक खेलमा लाग्नु भएको छ, यसलाई म नेताको स्तर नै मान्दिन । यस्ता नेताहरु जो पार्टी फुट्न थाल्यो कारवाही गर्नुपर्यो भन्छन त्यो नेताको गुण नै होइन । त्यस्ता मान्छेहरुले देश चलाउने जिम्मा पाए भने देश माथि लाग्दैन अद्योगति तर्फ लाग्छ ।
० जनसांस्कृतिक महासंघले देशव्यापी जनसांस्कृतिक कार्यक्रम गरिरहेको छ, यो क्रममा देशका विभिन्न ठाउामा संस्थापन पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले कार्यक्रममा अवरोध खडा गरेर, कतिपय ठाउामा आक्रमण समेत भयो, यस विषयमा के भन्नु हुन्छ ?
प्रवृत्तिगत ढंगले रुपान्तरण परिवर्तन र क्रान्ति तर्फ जान नचाहने प्रवृत्तिले यस्ता क्रियाकलापहरु गर्छ । व्यक्तिविशेषको दोषभन्दा पनि यथास्थितिवादी, पश्चगामी, प्रतिगामी दृष्टिकोणले काम गरेको छ । प्रतिस्पर्धीहरुलाई जित्नको लागि प्रतिस्पर्धाकै विधि सही हो । त्यसमा बल, पैसा, धाक धम्की लगाएर जितिन्छ कि भने सोचियो भने त्यो निरंकुशतावादी, अधिनायकवादी हुन्छ । यो नेपालमा असफल भइसकेको कुरा हो । कम्तिमा हिजो देखि जनताको साहित्य संस्कृति पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने पार्टी तथा त्यसका नेता एवम कार्यकर्ताहरुका एउटा हिस्साले अहिले जुन रवैया प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यो लाजमान्नुपर्ने खालको छ । माओवादी भित्रको एउटा धार कति तल गिरेको छ, कसरी विघटन, विचलित भएको छ, आˆनै गीत पनि सुन्न नसक्ने, आˆनै नाटक पनि हेर्न नसक्ने, यसले प्रमाणित गरेको छ कि हाम्रो अभियान ठीक छ भन्ने संकेत गर्छ ।
तपाईंहरु देश र जनता रुपान्तरण गर्ने भनेर अगाडि बढ्नु भएको थियो तर अब त पार्टी रुपान्तरणको लागि समिति हुनुपर्ने देखियो नि ?
‘पार्टी’ सिङ्गो देशको प्रवृत्तिसाग सम्बन्धित हुन्छ । पार्टीभित्रको संघर्ष पार्टीमात्रको हुन्न त्यो जनता र राष्ट्रसाग सम्बन्धित भएरै हुन्छ । त्यसकारण हामीले बाहिर पनि यथास्थितिवाद र प्रतिगमनको विरुद्ध लड्नुपर्ने हुन्छ पार्टीभित्र पनि त्यसखालका प्रवृत्ति विरुद्ध लड्नुपर्ने हुन्छ । एक ठाउामा लड्दा अर्कोलाई पनि प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । हाम्रो पार्टीभित्रको बहसले सिङ्गै नेपाली समाज र राजनीतिलाई प्रभावित पारेको हुन्छ । माओवादी भित्रको क्रान्तिकारी विचार समूहले आˆनो धारलाई अगाडि बढाउन चाहेको छ भन्ने कुराभित्र मात्रै होइन बाहिर पनि गएको छ । यो ठिकै कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
० सरकार निर्माणको लागि मधेसी मोर्चासग भएको चारबुादे सहमति’bout तपाईंहरुलाई जानकारी नै थिएन त ?
मोर्चासाग भएको सहमतिको ’boutमा हामीलाई कुनै जानकारी दिएको थिएन । अझ मैले बाबुरामलाई सोधेको थिएा, तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ, कुन स्टेप चाल्दै हुनुहुन्छ भन्दा यसो गर्दैछु भनेर उहाले हामीसाग कहिल्यै भन्नु भएन । बरु उहाले म कुनै पनि सम्झौता गर्दिन भन्नुभएको थियो । पछि मैले उहालाई धोका भयो भनेर भने पनि मधेसी मोर्चासाग भएको चारबुादे सहमति पार्टी नीति विपरित छ ।
० तपाईंहरुले नै काधमा चढाएर पठाउनुभएको प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्र र राष्ट्रियता माथि नै खतरा पैदा हुने खालको सहमति भयो, अब कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ त ?
बाबुरामजीले आˆनो कार्यकालमा राम्रो गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो कामना थियो । उहाका केही व्यक्तिगत क्षमताहरुलाई राष्ट्रको हितमा प्रयोग गरौं भन्ने हामीलाई लागेको थियो । बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाएर हेरौ त भन्ने हाम्रो एउटा आकांक्षा थियो त्यो हामीले पूरा गर्यौ । हाम्रै कारणले बाबुराम प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो, त्यो सुस्पष्ट कुरा हो । बाबुरामको ’boutमा जो प्रचार छ के हो त सत्य, उहााले कसरी देशलाई लान चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा एक चोटी सबैले बुझ्नु त भन्ने सबैको अपेक्षा थियो । त्यो देखापर्दैछ । कमजोरी गर्ने साथीहरुसाग लामो समय सहकार्य गर्न सकिन्छ, तर धोकेवाजहरुसाग दोस्रो पटक सहकार्य गर्न गाह्रो हुन्छ । धोका दिने साथीहरुले यो चाही ख्याल गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रो डियुटी इमानदारीतापूर्वक पूरा गर्यौ । बाकी, बाबुरामजीले गर्नु पर्यो त्यो त उहा आपैले सोच्ने कुरा छ नि ?
० तपाईंले माओवादी नेताहरुलाई लडाउने काम गनुभयो, प्रचण्ड र बादल लडे पुग्छ हामी त हेर्ने मात्र हो भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभयो भन्ने संस्थागत पक्षको आरोप रहेको छ, वास्तविक के हो ?
यो प्रदूषित खालको विचार हो । त्यो प्रायोजित मानसिकताको रोदन पनि हो । त्यो नाङ्गलो ठटाएर हात्ती तस्र्याउने शैली हो । त्यसको कुनै तुक छैन । माओवादी नेताहरु कसैले उचालेर उचालिने पछारेर पछारिने हैसियतमा छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । सबै नेताहरुको एउटा पृष्ठभूमि छ, क्षमता छ, योगदान छ र उहाहरु आˆनो योगदान क्षमता र पृष्ठभूमिकै कारण नेता हुनु भएको छ । यो कुरा सत्य हो । गलत प्रचारको कुनै तुक छैन । अहिलेको सन्देशमा यो कुरा साचो हो म किरण, बादल, कमरेडसग छ । उहाहरुका हरेक कदमहरुलाई मजबुत ढंगले साथ दिने र क्रान्तिकारी विचार, दिशा र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई पूर्णता दिन हाम्रो दह्रोसाग साथ दिन्छौ ।
० सरकारले चावी बुझाउने, कब्जा गरिएका घर जग्गा फिर्ता गर्ने लगायतका कार्यक्रम अगाडि सारेको छ, जुन कार्यान्वयनको चरणमा पनि प्रवेश गरिसक्यो, अब, तपाईंहरु कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ?
बाबुरामजीले सहिदलाई फेरि झुन्ड्याउन खोजेजस्तो अनुभूति भएको छ । एकचोटि जनताहरुले जमिन खोस्दा सहित हुनुपर्यो, अर्को पटक फेरि बाबुरामसाग, प्रचण्डसाग लडेर सहिद हुनुपर्ने अवस्था अघिको क्या हो भन्ने अनुभूति हामीसबैलाई भएको छ । रातारात किसानले हातमा रहेको जग्गा फिर्ता गर्ने भन्ने जुन सहमति भयो त्यो खतरनाक छ । जमिनदारको जमिन खोस्नुको सट्टा, किसानको हातबाट जमिन खोस्ने जुन काम भयो त्यो स्वत जनघाति कार्य हुन्छ । जनघाति कार्यको त प्रतिरोध गरिन्छ । म आपै फिल्डमा गएर प्रतिरोध गर्छु भनेर किसानसाग भनिसकेको छ । त्यसकारण जग्गा फिर्ता गर्ने कुरामा सहमति हुनै सकिादैन ।
० मधेसी मोर्चासाग भएको चार बुादे सहमतिमा मधेसी युवालाई दस हजारको संख्यामा नेपाली सेनामा छुट्टै फोर्सको रुपमा समावेश गराउने उल्लेख गरिएको छ, यस विषयमा पार्टीको धारणा के हो बताइदिनुस् न ?
मधेसीहरुलाई सेनामा ल्याउनुपर्छ यो सही कुरा हो । मधेसका नागरिकहरुलाई राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरुमा स्थान दिनुपर्छ, सहभागी गराउनुपर्छ । तर त्यो ल्याउने विधि प्रवृत्ति मिलाउनु पर्छ । मधेसवादीको प्रतिशत कै हिसाब गर्ने हो यसको संख्या अरु बढ्ला । तर यहाा दलित छ, महिला छ, जनजातिहरु छन् यी सबैको समर्थनलाई सम्बोधन गर्नुपर्यो नि । मधेसी युवालाई ठूलो संख्यामा नेपाली सेनामा सहभागी गराउने कुरामा काग्रेस, एमालेको पनि सहमति चाहिन्छ । त्यसको लागि राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्छ । मधेसी जनता भन्या कुनै एउटा मोर्चा तर पार्टीका पेवा त होइनन् नि ? तीनहरुका सम्पूर्ण अधिकारलाई त सिङ्गो राज्यले सबै पार्टीहरुले राष्ट्रिय स्तरबाट हल गर्नुपर्यो नि ।
० जनमुक्ति सेनाका सबै संख्यालाई समायोजनमा लैजान प्रधानमन्त्रीले खुट्टा कमाउने तर मधेसी मोर्चा सहमति गर्नुको आशय के हो त ?
त्यही त विचित्रको खेल भइरहेको छ । घर आगो लगाएर खरानी बेच्ने भन्ने जस्तो बुद्धि नहोस् भन्ने साथीहरुलाई कामना छ । माओवादी पार्टी, कार्यकर्ता, जनता भनेका केही नेताहरुका विर्ता होइनन् । उनीहरुका इच्छा अनुसार प्रयोग हुने, ˆयाकिने इच्छाअनुसार गठन हुने, भंग हुने कुनै पनि त्यस्तो हुादैन । त्यो त एउटा निश्चित विधि, मान्यता र विचारमा हुन्छ । क्रान्तिकारी विचारको स्वामित्व अवसरवादीहरुसाग हुादैन । क्रान्तिकारी विचारको स्वामित्व क्रान्तिकारीहरुसाग रहन्छ । जनतासाग रहन्छ । यो कुरा हामीले हेक्का राख्नुपर्छ ।
० गम्भीर खालका मुद्दाहरु फिर्ता लिन नमिल्ने गरी सत्यनिरुपण आयोग गठन गर्ने तयारीमा वर्तमान सरकार लागेको कुरा बाहिर आइरहेको छ, यस विषयमा के भन्नु हुन्छ ?
मलाई यो सबै कुरा नाटकजस्ता लाग्छन् । केही मान्छेहरुका चाहनाको लागि देशले बलिदान गरिदिनु पर्ने, कार्यकर्ताले बलिदान गरिदिनुपर्ने जस्तो जे भइरहेको छ यो सही छैन । यस विषयमा पार्टीमा दलहरुबीच छलफल हुनुपर्छ । एक दुई जना मान्छेको आकांक्षा अनुसार यो कामहरु हुन सक्दैनन् ।
० अब, माओवादीको रणनीति कस्तो रहन्छ ?
राज्य रुपान्तरण, राज्यका पुराना साधनहरुलाई बदल्ने र राज्यमा माओवादीको हिस्सा सहभागीता प्रत्यक्ष ढंगले चाहिन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो, त्यो हामी सबै, माओवादीको सहमति नै हो । तर, अहिले केही साथीहरु त्यसबाट पछि हटेजस्तो देखिन्छ । केही साथीहरु पछि हट्नु भएपनि क्रान्तिकारीधारले त्यसलाई सशक्त ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । राज्य रुपान्तरणको एजेण्डालाई जनताको विचमा रुपान्तरण गरेर फेरि संघर्षको वातावरण तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौ ।
० आˆनै पार्टी ने त्वमा बनेको सरकारमा तपाईंहरु सहभागी हुनु भएको छैन, सरकारको भविष्य कस्तो देख्नु हुन्छ ?
यो सरकारको कुनै औचित्य छैन । आˆनै पार्टीको विश्वासजित्न नसकेको सरकारको कुनै भविष्य छैन । जसले सरकार बनाउन सबैभन्दा मद्दत गर्यो त्यही साथीहरु नै सन्तुष्ट नभएपछि अरुको त के चर्चा गर्ने ।
नेपालमा लडाइा त ठूलो चलेको छ, त्यो पार्टी भित्र पनि छ, बाहिर पनि छ । यो लडाइा अरु केही नभएर जनताको पक्ष र विपक्षको लडाइा हो । राष्ट्रको पक्षमा उभिने कि विरुद्ध उभिने भन्ने लडाइा हो । यो लडाइामा जनताले राष्ट्रको पक्षमा, राष्ट्रियता र रुपान्तरणको पक्षमा उभिनुपर्छ । त्यस लडाइमा हामी सबै सहभागी भयौ भने लडाइ जितिन्छ । जहिले पनि सत्यको जित भएको इतिहास मैले पढेको छु । हामीले गल्ति गरेनौ भने यो लडाइामा पनि जनता र सत्यको जित हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छ ।